Madaxweynaha Maraykanka oo tartanka doorashada madaxtinimada dalkaasi ka bilaabay gobolka Ohio – Radio Daljir
Madaxweynaha Maraykanka oo tartanka doorashada madaxtinimada dalkaasi ka bilaabay gobolka Ohio
Columbus, May 06 – Madaxweyne Obama ayaa raadinaya in mar labaad loo soo doorto hogaanka dalkaasi maraykanka ee 4 sano ee ka dameysa marka uu dhamaado xilliga madaxtinimadiisa oo ku eg bisha Janury ee sanadka soo socda, iyadoo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka la qabanayo bisha November ee sanadkan.
Isaga oo la hadlayey taageerayaal faraxsan ayuu madaxweyne Obama sheegay in uu sii wadayo dagaalka lagula jiro hoos udhaca dhaqaalaha ee dalka maraykanka , islamarkaasina uu sii wadayo dadaalkiisa uu hore ugu sii riixayo dhaqaalaha Maraykanka marka loo doorto xilliga labaad ee madaxtinimada maraykanka.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in murashaxa Jamhuuriga ee Mitt Romney uu waqti dhumis ku yahay dadka maraykanka,laakiin waxa uu qiray in doorashada 6da bisha November ay noqon doonto mid aad la isugu dheganyahay.
Madaxweyne Obama ayaa iska difaacay dhaleecayn uga timi murashaca Jamhuuriga ee Mitt Romney oo kua adanayd in aan wax horumar ah laga samayn shaqa la?aanta Maraykanka oo weli ah 8% tan iyo horraantii sanadkii 2009kii.
Madaxweyne Obama ayaa sanadkii 2008dii loo dorotay madaxweynenimada Maraykanka , waxana uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo asal ahaan African ah oo xilkaasi qabta.
Doorashada soo socota ee Maraykanka ayaa waxaa saameyn weyn ku yeelan doonta , arrimaha dhaqaalaha, iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka.